प्रदुषणमा रुघाखोकीले नै लिनसक्छ ज्यान– ‘चिसो नखानू, धुमपान नगर्नू’ « AayoMail
प्रदुषणमा रुघाखोकीले नै लिनसक्छ ज्यान– ‘चिसो नखानू, धुमपान नगर्नू’
कोभिडको लडाइँमा हातेमालो गर्न काठमाडौं महानगरले गर्‍यो सात…
काठमाडौं–कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध लड्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका
काठमाडौं–राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले शनिबार चीनको
पुरातत्वविद डा. साफल्य अमात्यको कोरोना संक्रमणबाट निधन
काठमाडौं– विख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार तथा सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञ डा. साफल्य
वायु प्रदुषणका कारण उकुसमुकुस बनेको वातावरण। खानेपानी, विद्युत, सञ्चारलगायत पूर्वाधार निर्माणका नाममा खोतलिएका सडकबाट उड्ने धुलोको उस्तै समस्या। घर बाहिर निस्किँदा विषाक्त प्रदुषणका कारण आँखा पोल्ने, जिउ चिलाउनेजस्ता समस्या धेरै काठमाडौवासीका साझा समस्या बनिरहेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र बन्ने त्रास पनि उस्तै छ। सबैतिरबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर हुने वातावरण बनिरहेका बेला चिसो खानेकुरा त्याग्न, धुमपान नगर्न, मर्निङवाकमा नजाँदा राम्रो हुन्छ।
श्वासप्रश्वास प्रणाली नै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले काठमाडौंवासीले स्वास्थ्य, खानपान, रहनसहन र दैनिक क्रियाकलाप गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ।
यस्तो बेला मानव स्वास्थ्यमा हुनसक्ने असर, उमेर समूहअनुसारका व्यक्तिलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउने उपाय र यस्तो बेलामा आफ्नो स्वास्थ्य जोगाउन निम्न विकल्प अपनाउन सकिन्छ –
के असर गर्छ?
एकातिर वातावरणीय प्रदुषण, अर्कोतर्फ धूलाम्य काठमाडांैका कारण श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्छ। यसले छालाको एलर्जी हुने, नाक, कान घाँटी, आँखा चिलाउने, छिटो–छिटो रुघाखोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या आउनसक्छन्। यस्तो बेला निमोनियाको जोखिम पनि उच्च हुन्छ। जसलाई सुरुदेखि नै दमको समस्या छ, उनीहरू अझ बढी जोखिममा पर्नसक्छन्।
चौतर्फी देखिएको प्रदुषणले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र नभई छालामा समेत विभिन्न समस्या निम्त्याइदिनसक्छ। यस्ता कुरामा लापरबाही बढ्यो भने समस्या क्रोनिक भएर मिर्गाैला, मुटुजस्ता शरीरका महत्वपूर्ण अंगमासमेत ठूलै समस्या निम्तिन सक्छ।
मास्क नछाड्नू, हात धोइरहनू
हामीले कोभिडको समयदेखि नै मास्क लगाउन सिक्यौं, यो राम्रो पक्ष हो। अहिले पनि वातावरण प्रदुषणसँगै कोभिड पनि बढिरहेकै छ। यस्तो बेलामा मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ। निरोगीले पनि मास्क छाड्नुहुन्न। कोरोनाको विस्तार रोक्न पनि यो महत्वपूर्ण छ भने वायु प्रदुषणबाट फोक्सोलगायत शरीरका महत्वपूर्ण अंग जोगाउन पनि मास्क लगाइरहने बानी बसाल्नुपर्छ।
अफिसमा काम गर्दा वा स्कुल जाँदा वा घरमै बस्दा किन नहोस्, कुनै काम गरिन्छ वा केही छोइन्छ भने त्यसलगत्तै मिचिमिची हात धुने बानी बसाल्नुपर्छ। दिनमा कम्तिमा १० पटकसम्म हात धुने बानी बसाल्नु राम्रो हो। यस्तो बेलामा आँखाले नदेखिने धुलोका स–साना कण अनुहारमा टाँसिएका हुनसक्छन्, त्यसलाई समय–समयमा पखाल्नका लागि दिनमा चारपटक जति मुख धुने बानी बसाल्नु उत्तम हुन्छ।
मर्निङवाक नगएकै राम्रो
यस्तो बेलामा जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले घरबाहिर मर्निङवाक नगएकै राम्रो हुन्छ। शरीर र स्वास्थ्यका लागि मर्निङवाकमा जानु, व्यायाम गर्नु, सन्तुलित भोजन खानु निकै राम्रो हो। तर, अहिलेको समय मर्निङवाकका लागि प्रतिकूल छ।
अहिले काठमाडौंका कतिपय ठाउँमा पार्क बनेका छन्। त्यहाँसमेत घुम्ने चलन छ। त्यस्ता ठाउँमा घुम्न जाँदा भीडभाड छ छैन ख्याल गर्नुपर्छ। भीडभाड हुने ठाउँमा यस्तो बेलामा नगएकै बेस हुन्छ।
त्यसो त सरकारले पनि बारम्बार भीडभाड नगर्नू, भोजभतेर नगर्नू, पार्टी आयोजना नगर्नू भनेर सूचित गरिरहेकै छ। यस्तो बेलामा जनताले समेत सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गर्नु सबैको हितमा हुन्छ।
यी लक्षण देखिए तुरुन्त अस्पताल जानुस्
यस्तो बेलामा तपाईंलाई रुघाखोकी लाग्यो र दुई–तीन दिनसम्म ठिक हुने संकेत देखिएन भने तुरुन्त डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ। नियमित काम गर्दा सास फेर्न थोरैमात्र गाह्रो महसुस भयो भने पनि अस्पताल पुग्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। सामान्य समस्या हुँदा हामी आफैं जान्ने भएर फार्मेसीमा गई औषधी लिएर प्रयोग गर्छौं, यो गलतमात्र होइन घातक प्रवृत्ति हो। यी सबै मुर्खता छाडेर डाक्टरकोमा गइहाल्नु बुद्धिमता हुन्छ।
प्रदुषण अचाक्ली बढेका बेला निमोनिया, फोक्सोमा पानी जम्ने, रगतमा इन्फेक्सन देखिनेजस्ता समस्या हुन बेर लाग्दैन। त्यसकारण ज्वरो आएजस्तो हुने, थकान महसुस हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् भने अस्पताल पुग्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। २४ घन्टासम्म पनि तपाईंलाई सहजता महसुस भएन, दैनिक काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने विशेषज्ञ चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ। यस्तो बेलामा स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
यस्तो बेलामा बालबच्चाको विषयमा झनै गम्भीर बन्नुपर्छ। मौसम परिवर्तन हुने समय समेत भएकाले यसलाई ‘एलर्जिक टाइम’ मानिन्छ। यस्तो बेलामा बालबच्चालाई रुघाखोकी त्यसै पनि लागिरहेको हुन्छ। तर, धेरै घ्यारघ्यार भयो, सास फेर्न कठिनाइ भयो, सानो बच्चाले आमाको दूध चुसेन भने अस्पताल लैजान ढिलाइ गर्नुहुन्न। बच्चाले आफूलाई के भइरहेको छ भन्ने कुरा बताउन सक्दैन, तसर्थ बच्चाको विषयमा लापरबाही गर्नुहुन्न।
गुगल गर्नु कति ठिक?
पछिल्लो समय युवामा सबै कुरामा समाधान गुगलमा खोज्ने चलन छ। यो राम्रो बानी होइन। गुगलले हामीलाई सूचनामात्र दिन्छ, त्यसको भरमा कुनै काम गर्नु हुँदैन। गुगलले बाटोमात्र देखाउने हो। गुगलमा हेरेको वा पढेको भरमा फार्मेसीमा गएर औषधी लिएर खानु त झनै ठूलो मुर्खता हो। हामी शिक्षित छौं, तर अशिक्षितले झै काम गर्छौं। फार्मेसीबाट डाक्टरको सिफारिसबिना औषधी लिनु घातक हुन्छ।
जुनसुकै अस्पतालका डाक्टरलाई भेट्नुहोस्, परामर्श नराम्रो हुन्न। औषधी चाहिए औषधी दिन्छन्, नभए सही सल्लाह दिन्छन्। गुगलले वेआउट दिँदैन। त्यसकारण गुगलको सल्लाहका भरमा जे पायो त्यही औषधी सेवन गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ।
धुमपान छाड्नू, पेयपदार्थ नलिनू
अहिले युवामा धुमपान फेसनजस्तो बनेको छ। मास्क पनि प्रयोग नगर्ने, धुमपान पनि गर्ने र वायु प्रदुषणको अवस्था अझै बिग्रँदै जाने हो भने यस्तो वातावरणमा धुमपान गर्नेको ज्यानै जानसक्ने जोखिम हुन्छ। धुमपानले गर्दा कोभिड संक्रमण भए गम्भीर अवस्था त निम्त्याउँछ नै श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र नभई शरीरमा ९० प्रतिशत रोग यसकै कारण हुन्छ।
एकातिर प्रदुषणले सास नै फेर्न कठिन परिरहेको समयमा उल्टो धुमपान गर्न थालियो भने र त्यस्तालाई कुनै संक्रमण भयो भने ९९ प्रतिशत बाँच्ने सम्भावना हुन्न। त्यसकारण आफ्नो मृत्यु आफैंले बोलाउने काम बन्द गरौं। धुमपान छाडेको राम्रो हो।प्रदुषणका कारण यसै पनि फोक्सोलाई असर पु¥याइरहेको छ, त्यसमाथि धुमपान ग¥यो भने समस्या झनै क्रोनिक बन्नेछ।
यस्तो बेलामा खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भरसक चिसो खानेकुरा नखानुहोस्। तातो खानेकुरामा मात्र जोड दिनुपर्छ। पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण, ताजा, अर्गानिक उत्पादन खाने बानी बसाल्नुपर्छ। यस्तो बेलामा केटाकेटी, बुढापाका र रोगीलाई कुनै पनि बहानामा आइसक्रिम, फ्रोजन फुड, जंक फुड, चिसो पेयपदार्थ दिने भुल नगरौं। यस्ता वस्तुको प्रयोगबाट कतिबेला निमोनिया हुन्छ र ज्यान नै जोखिममा पर्छ भन्ने टुंगो हुँदैन। यस्तो बेलामा चिल्लोपिरो पनि कम खानुपर्छ। सबै खानेकुरा उमालेरमात्र खाने गर्नुपर्छ।
निष्कर्षमा वायु प्रदुषण, काठमाडौंको धुलो धुँवा, त्यसमाथि विस्तार हुँदै गएको कोभिड संक्रमणमा हामीले लापरबाही ग¥यौं भने जुनसुकै बेला भयावह अवस्था निम्तिन सक्छ। कम्तिमा हरेक घरका सदस्यले, हरेक नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो परिवार, समाज र देशवासीकै स्वास्थ्य जोगाउने दायित्वबोध गरेर मास्क लगाउने, भीडभाड नगर्ने, भीडभाडमा नजाने, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, धुमपान त्याग्ने, चिसो खानेकुरा र पेयपदार्थ भरसक नखाने, चिल्लोपिरो नखाने, घरमै व्यायाम गर्ने, प्रशस्त पानी पिउने, अर्गानिक खानेकुरामात्र खाने, विभिन्न खाद्यवस्तु उमालेरमात्र खानेजस्ता बानी बसाले धेरै हदसम्म आफ्नो फोक्सो जोगाउन सकिन्छ, आफू पनि जोगिन सकिन्छ। तपाईं एकजनाको गल्ती, लापरबाहीका कारण पूरा परिवार, समाज र देशले नै दुःख नपाओस्।
(डा. सुरजकुमार गुप्ता
दम तथा छाती रोग विशेषज्ञ, नर्भिक अस्पताल)
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, नेपाल-खनाल समूहमाथिको कारबाही फिर्ता हुनसक्ने
सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन भने सकेको छैन। आजको
अढाई घण्टापछि शीतल निवासबाट बाहिरिए माधव नेपाल
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गएका नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल बाहिरिएका छन्। साढे ७ बजेदेखि अढाई घण्टा राष्ट्रपति
एमालेमा विवाद समाधानको प्रयास : होटल मेरियटमा विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र…
काठमाडाैं वैशाख २७ नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेका दुई समूहबीच विवाद समाधानको पहल पुनः सुरु भएको छ जसअन्तर्गत बिहीवार अपरान्ह नेताहरु
देउवालाई भेटेर फर्किएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगे माधव नेपाल
काठमाडाैंं सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटलगत्तै नेता नेपाल